ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး အဖွဲ့ (China Publishing Group-CPG) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tan Yue အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး အဖွဲ့ (China Publishing Group-CPG) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tan Yue အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ (China Publishing Group-CPG) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tan Yue အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးမှ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသို့ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုဘိုဦး နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စာကြည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို အဆိုပါ စာကြည့်တိုက်၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ (China Publishing Group-CPG) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tan Yue က စာအုပ်များ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် က လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ကာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်